I-ID yobuso yoyisiwe yimaski | Iindaba zeGajethi
URuben inyongo | | iapile, ngokubanzi
Ukufika kwesango elitsha lokhuseleko elisebenzisa i-Apple kwi-iPhone yalo kuthiwa yi-ID yobuso. Kukutshintsha i-ID yeTouch, loo mfundi ufunda iminwe owayesetyenziswa kwiifowuni eziphathwayo nakwii-iPads okoko kwavela i-iPhone 5S. Nangona kunjalo, kwi-iPhone X lo mfundi uyanyamalala - ecaleni kweqhosha elibonakalayo le «Ekhaya» - ukunika indlela kwikhamera engaphambili enobunzima ngakumbi kunaleyo isetyenzisiweyo ukuza kuthi ga ngoku.
Kwinkcazo yefowuni entsha ye-Apple kwavakaliswa ukuba le ndlela ayinakusilela. Ngapha koko, ukwenza izinto zibe mbi ngakumbi, iApple inike amanani kwaye yagqabaza Ireyithi yempazamo yobuso be-ID yayiyi-1 kwisigidi; Ukuba oku bekufanele kuthelekiswa ne-ID yeTouch, le yokugqibela iphumelele inqanaba le-1 kwayi-50.000. Oko kukuthi, akukho nto inokwenza nenkqubo enye nenye. Nangona kunjalo, inkampani yase-Vietnam esekwe ngokhuseleko, i-Bkav, ibonakalisile ukuba i-ID yobuso inokubethwa. Kwaye okona kubaluleke kakhulu, ngemaski eprintiweyo.
I-Bkav isebenza ukoyisa inkqubo yezokhuseleko eyaziwayo ebandakanya okwangoku, i-iPhone X ngokukodwa. Inkampani yokhuseleko isebenzise imaski eprintiweyo ye-3D ukugqitha kukhuseleko lwee-sensors ezinzulu kwifowuni ka-Apple. Ngokufanayo, kuthathe ukuya kwiintsuku ezi-3 ukwakha le maski Yenziwe ngesiseko sokwenza izinto kunye nesiseko esikhethekileyo 'sesikhumba' soku.
Ixabiso lezixhobo lifikelele kwiidola ezili-150. Ewe uyakufuna umshicileli we-3D ukwenza imveliso. Ke ngoko, nangona ingeyondlela ekufuneka ihlawulwe ngayo, njengoko sinokubona kwividiyo ehamba neli nqaku, Isazisi sobuso asisiyonyani. Ngaphezulu, inkampani ngokwayo ithi abafundi bebhayometri yeminwe yindlela ethembekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » iapile » I-ID yobuso yoyisiwe yimaski